व्यवसाय क्षेत्रमा काम अधिक हुनेछ र परिणाम कम हुनेछ । राम्रा काम लगभग अधुरो हुनेछ। सरकारी मामिलामा लापरवाही नहुनुहोस् । कार्यालयको वित्त सम्बन्धित काम धेरै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। यो हप्ता लागि शुभअङ्क : ४ र शुभरङ्ग सेतो रहन्छ । तपाईंले प्रेम र रोमान्सको साथ प्रेमको उत्तर फेला पार्नुहुनेछ। तपाईंको जीवनमा पर्दा पछाडि केहि बढिरहेको छ जुन तपाईंलाई समस्या निम्त्याउन सक्छ । आउँदो दिनमा धेरै राम्रा अवसरहरू तपाईको हातमा आउनेछन् ।
यो हप्ता नकारात्मक वृत्तिको मानिसहरुसंग सम्पर्क नगर्नुहोला । तपाईंको सम्मानको बारेमा पनि नकारात्मक कुरा गर्न सक्छन। छिमेकीहरुसंग सम्बन्ध सुधार हुनेछ । आफैंलाई र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु होला । शान्तिपूर्ण तरिकामा समय खर्च गर्नुहोस् । यो हप्ताको लागि शुभअङ्क : २ र शुभरङ्ग : बैजनी वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि कार्यसिद्धि मन्त्र ॐ कुलदेवताभ्यो नम: जप गर्नुहोला ।
सुनेका कुरामा मात्र विश्वास गर्नाले काम बिग्रिनसक्छ । तथ्य थाहा नपाई कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोस्। मानसिक शान्ति र शान्ति महसुस गर्न कुनै पनि धार्मिक गतिविधि वा ध्यानको लागि सहारा लिन उचित हुन्छ । व्यस्तताका कारण तपाई परिवारको साथ घरमा पनि समय दिन सक्नुहुन्न तर परिवारका सदस्यहरूको हजुरमा पूर्ण समर्थन हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध पनि मर्यादाकोपूर्ण हुनेछ। स्वास्थ्य- मौसमले तपाईंको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नसक्छ ।
यो हप्ता काम बिग्रिन सक्छ र केहि गर्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस् । अनजानमा, तपाईंको मनोवृत्तिले कसैको भावनामा चोट पुर्‍याउन सक्छ। तपाईंको नाममा रहेको भूमि राम्रो मूल्यमा बेच्न सकिन्छ, जसले तपाईंलाई लाभदायक बनाउँदछ । तपाईंको अवरोध गर्ने मनोवृत्तिले घरको मान्छेको चित्त दुखाउन सक्छ, नजिकका साथीहरूले समेत चोट पुर्‍याउन सक्छन् । बिक्री सम्बन्धित काममा बढी ध्यान दिनुहोस् ।
यो हप्ता युवाहरूले प्रतिष्ठित व्यक्तिको मद्दत प्राप्त गर्दछन्, उनीहरूको कुनै पनि काममा सफलताको लागि अग्रसर रहनेछन । मानसिक खुशी र शान्ति प्राप्त हुनेछ । एक आध्यात्मिकता वा ध्यानको सहाराले जीवनमा राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ । शुक्रवार क्रोध र जिद्दीले कसैको साथ सम्बन्ध पनि बिगार्न सक्छ । घरका अग्रजहरूको मार्गदर्शनलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् । सप्ताहको अन्त्यमा व्यापार गतिविधिहरु केहि अनुकूल हुनेछ।
यो हप्ता लामो समयको लागि भइरहेको रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ । शंकास्पद आर्थिक लेनदेनमा फस्नदेखि सावधान रहनुहोस् । व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी खुलासा नगर्नुहोस्। एकतर्फी मायाले तपाईंको मुटु तोडीन सक्छ। व्यापार बैठकहरूमा भावनात्मक र चर्को आलोचना नहुनुहोस् । यदि तपाईंले आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नुभएन भने यो हप्ता तपाईं सजिलै आफ्नो प्रतिष्ठा बिगार्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक रहन्छ।
यो हप्ता तपाईंको स्पष्ट र निडर मनोवृत्तिले तपाईंको साथीको अहंकारमा चोट पुर्‍याउनसक्छ । सावधानीसँग बोल्ने र वित्तीय लेनदेनमा अभ्यास गर्नुपर्छ । कुनै धार्मिक स्थान वा आफन्तको भ्रमण गर्ने सम्भावना छ । तपाईं आफ्नो प्रियजनलाई आफ्नो अवस्था बुझाउन कठिनाई महसुस गर्नुहुन्छ । जो कला र मिडियाआदिसँग सम्बन्धित छन् उनीहरूलाई यो हप्ता आफ्नो सीप प्रदर्शन गर्ने थुप्रै नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन् ।
यो हप्ता राम्रो समय रहेको छ, कुनै काममा हतार नगर्नुहोस् । फोन कल र इन्टर्नेट मार्फत तपाईको धेरै जसो कामहरू पूरा गर्न कोशिस गर्नु उत्तम हुन्छ । घरबाट कार्यालयको काम गर्नमा केही समस्याहरू पनि हुनेछन् । प्रेम सम्बन्धमा, परिवारको स्वीकृतिले दिमाग मन खुशी राख्नेछ र घरको वातावरण सुखद र उपयुक्त रहनेछ । स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। धेरै मस्तिष्क र शारीरिक कामको कारण टाउको दुख्ने र थकानको समस्या पनि रहनेछ ।
यो हप्ता मानिसहरूले तपाईलाई गरेको टिप्पणीका कारण तपाईले नकारात्मक महसुस गर्नुहुनेछ । केवल ती चीजहरूलाई पछाडि छोड्नुहोस् जुन पछाडि छोडियो र दिमागमा राख्नुहोस् कि प्रत्येक आउँदै गरेको समय तपाइँको लागि नयाँ अवसर हुनसक्छ। प्रेम: जुन चीजहरूबाट तपाई पीडित हुनुहुन्छ, तपाईले ती चीजहरू पार्टनरसँग साझेदारी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य: खुट्टा सम्बन्धी असुविधा हुन सक्छ ।
कसैबाट धेरै आशा नगर्नुहोस् । मनमा खिन्नता र दिमाग विचलित हुन सक्छ। तपाईंको कार्य आफैंमा पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कल्पनामा नबस्नुहोस् र वास्तविकतामा आउनुहोस् र जीवनको वास्तविकता बुझ्नुहोस्। स्वास्थ्य- पेट सम्बन्धी केहि समस्याहरू जस्तै कब्ज, पेट फूल्ने, ग्यास आदि समस्या पर्न सक्छ। भाग्यशाली रंग - निलो, भाग्यशाली संख्या – ८ रहनेछ । जीवनसाथीको व्यवहारले तपाईंको सहकर्मी सम्बन्धहरूलाई नराम्रो असर पार्न सक्छ ।
सबैले गाली गर्न सक्छन्, तपाईले असहयोग पाउनुहुनेछ । यो अनुभवले धैर्य गर्न सिकाउनेछ । खुट्टा दुख्नसक्छ र यदि तपाईंलाई खुट्टामा केही दुखाइ छ भने आधा घण्टा मालिश गर्नुहोस् वा तातो पानीमा खुट्टा भिजाउनुहोस् । यदि दुखाइ बढ्यो भने नजिकको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् । विवाहित जीवनकोलागि सबैभन्दा विशेष हप्ता मध्ये एक हुनसक्नेछ ।
यो हप्ता एक लेनदार तपाईंको ढोकामा आउनसक्छ र तपाईंलाई ऋण दिनको लागि सोध्न सक्छ । कुनै एक मित्र तपाइँलाई आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरूको समाधानको लागि सोध्न सक्छ । विवाह विवाहप्रस्तावको लागि समय सही छ, किनकि तपाईंको प्रेम जीवनभर परिवर्तन हुन सक्छ । सेमिनारहरू र प्रदर्शनहरूमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ र तपाईंलाई नयाँ जानकारी र तथ्यहरू प्रदान हुनेछ ।
ज्यो. पं. घनश्याम पोख्रेल (९८४१४७९७०७)​
मेष काममा रहेको सुस्तताको प्रभाव विवाहित जीवनमा पर्न सक्ला । प्रेम मामिलामा केहि तनाव हुनसक्छ । स्वास्थ्य- अत्यधिक थकानले स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्नसक्छ । समय-समयमा आराम र उचित खाना लिनुहोस्। भाग्यशाली रंग - रातो,...